Xarun loogu talagalay Isboortiga iyo Dhalinyarada oo Gaalkacyo laga furay+SAWIRRO – Gool FM
Xarun loogu talagalay Isboortiga iyo Dhalinyarada oo Gaalkacyo laga furay+SAWIRRO
jilacow December 14, 2016
(Madrid) 14 Dis 2016 Magaalada Gaalkacyo dhankeeda Waqooyi waxaa shalay laga furay Xarun loogu talagalay Sportiga iyo Jirdhiska Dhalinyarada taas oo lagu magacaabo Himilo Fitness And Youth Centre.
Waxaa loo dhisay hab-casri ah,waxaana ay ka kooban tahay xarunta Himilo Fitness And Youth Centre Garoomo kubadda cagta, Kubadda kolayga, meelo lagu nasto, goobo lagu Jimicsado iyo maktabad buugaagta lagu akhristo.
Maxamed Jeelle oo ah Madaxa Mashaariicda Hay’adda PUNCHA oo ka hadlay Xafladda Xariga looga jaray Xarunta Dhalinyarada iyo Jirdhiska Himilo ayaa sheegay inloogu talagalay inay qayb ka noqto korinta maskaxda dhallinyarada gobolka,wuxuuna intaas ku daray in lugu dhammeystiray dhamman adegyadda isboortiska iyo jirdhiska oo ay dheeryihiin goobo wax lugu akhriyo iyo kuwa lugu nasto.
Mas’uuliyiintii sidookale kasoo qayb gashay halkaasna ka hadlay waxaa ka mid ahaa Duqa Demada Gaalkacyo ee Puntland Maxamuud Yaasiin Tumey iyo Dr Cabdiqaadir Maxamuud Jaamac (Dhaga-cadde) kuwaas oo Dhalinyarada ku dhiiri-galiyay inay qayb ka qaataan hormarka Gaalkacyo iyo sidii kaalin muuqata ay uga qaadan lahaayeen Bilicda Magaalada.
Sidookale Gudoomiyaha Sportiga Gobalka Mudug dhanka Puntland Maxamed Muuse Salwe oo ku hadlayay afka Bahda Sportiga ayaa mahadcelin weyn u jeediyay qofkasta oo ka qayb qaatay sidii Xaruntan loogu dhisi lahaa Dhalinyarada iyo Bulshada Gaalkacyo.
Markii ay soo idlaatay Khudbadihii iyo Xafladii ayaa waxaa Garoonka Kubadda Cagta Himilo lagu qabtay Koob Afar Kooxood ah,iyadoo Koobkaas ay ku guulaysatay Koox ka socotay Xaafada Hormar.
Xarunta Himilo Fitness And Youth Centre ayaa dhismaheedu wuxuu socday mudo todobo bilood ah waxaana Mashruucan dhaqaalaha lagu dhisay bixiyay hay’addo ka shaqeeya Hormarka Dhalinyarada,waxaana dhawaan Xariga laga jari doonaa Xarun midaas la mid ah oo Koofurta Magaalada Gaalkacyo laga hirgaliyay.
W/D:Burhaan Cabdullaahi Xaashi-Gaalkacyo
Chelsea iyo City oo la wada ganaaxay...Ma dhibic ayaa laga jaray Blues?
Xavi oo wali wada weerarka: Ronaldo uma qalmo Ballon d'Or"